Waa maxay shahaadooyinka ugu wanaagsan ee Blockchain ee Dubai? |
Waa maxay shahaadooyinka ugu wanaagsan ee Blockchain ee Dubai?
Weli Nolosha Ku Jira Imaaraadka Carabta - Miyuu ku haboon yahay in la doorto?
Waxaa laga yaabaa 15, 2019
Top 10 Linkedin Pages si aad shaqo ugu hesho Dubai
Waxaa laga yaabaa 17, 2019
Published by Shirkadda Dubai City at Waxaa laga yaabaa 17, 2019
Central Blockchain Council of America ee Dubai
Technology Blockchain Isu Diyaarin Doonta Dhibaatada Dunida?
Waa maxay Blockchain oo aduunkoo dunidu saamaynayso?
Maxay yihiin shahaadooyinka ugu fiican gudaha Blockchain gudaha Dubai? Blockchain waa saamaynaya adduunka oo dhan maadaama ay carqalad ku tahay warshado kasta oo ay la kulanto. Waxay leedahay awood weyn oo ay ku beddesho sida macaamillada khadka tooska ah ee internetka loo maareeyo iyo loo sii wado oo leh maal gelin iyo bangi, waa la wada dhigay si loo carqaladeeyo daryeelka caafimaadka, madadaalo, iyo waaxyo kale oo badan.
Blockchain wuxuu fududeeyaa macaamil baahin guud ahaan shabakadaha isku faca iyo wuxuu baabi'iyaa doorarka dhex dhexaadlaha. Tan natiijooyinka hawlgallada degdegga ah iyo ajuurada hooseeya. Sidoo kale, xashka loo yaqaan 'cryptography hash' wuxuu ka dhigayaa blockchain si aad ah loo xafiday, daahfuran, oo gaar loo leeyahay.
Waad aqrisay taas warshadaha ayaa ka faa'iideysanaya tikniyoolajiyadan. Waa inaad sidoo kale ogaataa taas warshadaha kala duwan waxay ka faa iidaysan doonaan faa'iidooyin kala duwan tikniyoolajiyada 'blockchain technology'. Sababta ay tahay inaad jidka u dhigto tikniyoolajiyaddan xoogga leh ayaa ah in kaqeybgalayaasha ku lugta leh ay xaqiijin karaan macaamil ganacsi iyada oo aan loo baahnayn xarun dhexe oo caddeyn ah.
Dariiqa loo maro xirfadda blockchain guuleysatey maahan mid sahlan. Waxaad ubaahantahay inaad lahaato noocyo xirfado gaar ah oo cadeynaya inaad uqalanto tikniyoolajiyadda. Dabcan, blockchain ma aha wax fudud sida ay u muuqan karto. Laakiin, dhanka kale, cadeynta waxay hubineysaa inaad heshid waxbarasho ku filan oo aad ku guuleysato horumar. Shahaadooyinka Blockchain hadda ayaa laga heli karaa Dubai sidoo kale.
Aan ka caawinno inaad xirfad ku sameysid blockchain adoo ku soo bandhigaya shahaadooyin gaar ah
Golaha Dhexe ee loo yaqaan 'The Block' Chain Council of America oo leh Shirkadda Dubai City
Jaamacadda Wollongong ee Dubai
Tikniyoolajiyadani waxay ku socotaa inay kacdoodeyso habka warshadaha ayaa sameeya ganacsi. Hogaamiyaha aan la xakamayn karin ayaa ciyaarta ganacsiga ka dhigaya mid hal heer ah. Jaamacadda Wollongong ee Dubai waxay iskaashi la sameysay akadeemiyada xirfadaha ee IBM si ay u bixiso barnaamij tababar horumariyaha Blockchain ah kaasoo taabanaya aasaaska aasaasiga ah ee blockchain. Waxay habeyn doontaa xirfadahaaga ficil ee qaabeynta iyo hirgelinta ganacsi xalalka ku saleysan blockchain. Dhamaadka barnaamijka, maskaxdaada waxaa lagu dhex gelin doonaa faham qoto dheer oo ku saabsan fikradaha blockchain.
Waxay kaa dhigi doontaa inaad si fiican u fahamto fikradaha hogaamiyaha wadaaga, faa'iidooyinka madal blockchain, awoodaha curinta Hyperledger, keenida blockchain iyo inbadan. Xirfadlayaasha 'Blockchain' waxay helayaan awood ay ku falanqeeyaan xaaladaha isla markaana ku dabaqaan fikradaha la bartay. Waa inaad sidoo kale ogaataa taas kadib markii si guul ah lagu dhammaystiray tababarka iyo imtixaanka, waxaa lagu siin doonaa IBM's Blockchain Developer Mastery Badge.
Tababarka & La-tashiga
Tababbarka iyo latalinta Meirc wuxuu bixiyaa koorsada saykoolajiga ee loo yaqaan 'blockchain masterclass' oo ku tiirsan slides faahfaahsan oo muuqaal ah iyo sidoo kale fiidiyowyo. Waxaa intaa dheer, tusaalooyin wax ku ool ah, wadahadalada kooxda iyo laylisyo badan oo dheeri ah. Marka, guud ahaan marka laga hadlayo, taasi waxay kugu sii adkaysan doontaa inaad ku mashquuliso inta lagu jiro tartanka barnaamijka oo dhan. Dhamaadka koorsada kadib. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad fahanto xirfadahaaga oo aad fahanto shaqooyinka gudaha ee bulshada iyo rukhsadaha la oggol yahay, qiimeeyaan suurtagalnimada kiisaska loo adeegsado kiisaska 'blockchain', xulashada aaladaha blockchain ee ugu fiican. Dhinaca togan, waxaad tijaabisaa adeegyada iyo waxaad awoodi doontaa inaad noqotid mashruuc qaabeynta xalalka blockchain. Sidoo kale, waxaad baran doontaa qaabka xeeladaha hirgelinta ee ururka.
Maskaxda ku hay in koorsada loogu talagalay falanqeeyayaasha, maamuleyaasha ama agaasimeyaasha heer-heer-heer ee doonaya inay horumar sameeyaan istiraatijiyad blockchain ah. Koorso koorsadan u noqo si aad ugu fiicnaato xirfad-hayaha ururkaaga.
Machadyada Tababarista Bartayaasha
Noqo rukhsad la xaqiijiyay xirfad u leh tababarka koorso ay bixiso Insitition Tababarka Bartayaasha si ay u yeeshaan faham qoto dheer waxa dhab ahaan blockchain yahay. Ujeeddada koorsada ayaa ah in lagu siiyo fikrado, kaa dhigo mid caqli gal ku ah hirgelinta barnaamijyada blockchain, muujinta tooska ah ee dejinta shabakad 'blockchain' u gaar ah, keenista qandaraasyo caqli badan iyo waxyaabo kaloo badan. Barnaamijka tababarka 'blockchain' waxaa loogu talagalay silsiladda Alaabta Manager, Maareeyaha Saadka, Lataliyaha ERP, Maamulaha Howlaha Gadashada, Maareeyaha Qorsheynta Dalbashada, Maareeyaha Iibsiga, iyo Isku-duwaha saadka. Noqo a xirfad ku leh xayiraadda oo sayidaa wax kasta oo loo baahan yahay in la dhiso a mustaqbalkiisa gudaha blockchain.
CBCA guud ahaan waxay ka hadashaa, waxay siisaa shakhsiyaadka shahaadooyin Xirfadeed Ganacsi ah. Waxaa intaa dheer, qof kasta oo raba inuu fahmo fikradaha blockchain casriga ah. Tusaale ahaan, mabaadiida, codsiyada, iyo teknolojiyada. Waxay noqdaan xirfadlayaal la aqoonsan yahay oo hel xirfado la xaqiijiyay waxaana lagu aaminay inay ku filan yihiin inay ka fuliyaan xeeladaha blockchain ee ururka. Koorsadu waxay daboolaysaa fikradaha blockchain, iyo sidoo kale cryptocurrency fikradda, iyo qaab-dhismeedka, aasaaska aasaasiga loo adeegsado barnaamijka 'blockchain application'. Intaa waxaa sii dheer, bixinta kharashaadka ganacsiga 'blockchain' ee ganacsiga, kiisaska isticmaalka iyo maaraynta mashruuca blockchain. Waxay ka kooban tahay ilaha ugu badan ee dunida laga helo. Iyo guud ahaan ka hadlida, buug kaa dhigaya inaad u diyaar garowdid wax ka qabashada caqabadaha adduunka blockchain ka jira. Oo u soo baxa guul.
Technology Blockchain Technology (CBCP)
Tiknolojiyadda Machadka Blockchain wuxuu kaa dhigayaa Shahaadada Blockchain Professional (CBCP). Lagu tilmaamay cadeyntooda iyo wanaajisaa aqoontaada gudaha Blockchain iyo Bitcoin Fundamentals. Sidoo kale, Hordhacyada Cryptocurrency, Heerka Sare ee Bitcoin. Wadajir ahaan macaamil xawilaadaha, iyo Blockchain Heerka Sare: Wuxuu adeegsadaa wixii ka baxsan Bitcoin. Imtixaanku wuu ku caawin doonaa Isu diyaari si kugu filan oo aad karti ugu yeelato inaad ganacsi guuleysato oo leh barnaamijyada isku dhafan ee 'blockchain'. Isu diyaari qeybta tikniyoolajiyada Machadka Blockchain oo aad ku fiicnaato xirfadaada.
Maaddaama Blockchain yahay mustaqbalka. Guud ahaan marka la hadlayo, waa waqtiga ku habboon si aad u sameyso shaqo aad u wanaagsan berrinkan iyo cirka sare. Marka, fursad u hel awooda lagu muujiyo kartidaada ku kasbaday shahaadooyin !.
Global Golaha Blockchain ee Dubai
Ma sharci baa in UAE?. Haa, waa hawl qalliin 100% ka socota Dubai. Dhanka kale, waxaad ka hubin kartaa Dubai Future Foundation halkee ku haysaa kumanaan daabacan iyo la xiriirida macluumaadka ku saabsan tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay ee blockchain ganacsiga horumarka.
'' Future Future Foundation '' waxaa loo bilaabay inuu kaalin muhiim ah ka qaato qaabeynta mustaqbalka Dubai. Ka sokow bilaabida Ajenda mustaqbalka ee Dubai mustaqbalka iyada oo ah marin-hagtada wadada. Dhinaca togan, waxay qaabeeyaan mustaqbalka qaybaha istiraatiijiyadeed ee dhexdhexaadka iyo muddada dheer iskaashiga oo ay la leeyihiin dawladda iyo hay'adaha gaarka loo leeyahay.
Shahaadooyinka loogu talagalay Xirfadlayaasha Blockchain Dubai
Golaha Dhexe ee Baarlamanka ee Central
Golaha Dhexe ee loo yaqaan 'Block Block' Council of America ee Dubai. Marka, waa maxay caddaymaha ugu fiican ee Blockchain ee Dubai ?. Shirkaddeenna, guud ahaan hadleysa, waxay kaaga jawaabeysaa hoosta.
Dukaamada oo dhan waxay awoodaan inay ku helaan Shaqo Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Shaqooyinka ku yaala Dubai. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, hadda waad heli kartaa hagayaal, talooyin iyo shaqaalaynta Imaaraadka Carabta Emirates oo leh luqaddaada.